Arrin ka fog hadalkii Wasiirka Xoolaha Puntland oo la ogaaday in dib Sacuudigu ugu soo celiyeen xoolo nool dekedda Boosaaso – Madal Furan
Hoy > Warka > Arrin ka fog hadalkii Wasiirka Xoolaha Puntland oo la ogaaday in dib Sacuudigu ugu soo celiyeen xoolo nool dekedda Boosaaso
Arrin ka fog hadalkii Wasiirka Xoolaha Puntland oo la ogaaday in dib Sacuudigu ugu soo celiyeen xoolo nool dekedda Boosaaso
Editor August 10, 2018 0
Boosaaso (Madal Furan) – Waxaa dekedda magaaladda Boosaaso ku soo wajahan Markab sida xoolo nool oo dib looga soo celiyey waddanka Sacuudi Carabiya.
Markabkan oo lagu magacaabo Alpha ayaa horay wuxuu uga tegay dekedda magaaladda Boosaaso oo uu ka qaaday xoolo tiradooda lagu sheegay in ka badan yihiin 27,000 oo neef ari ah.
Lama oga sababta dhabta ah ee ka danbeysa in dib ay dowladda Sacuudigu ugu soo celiyaan xoolaha nool halkii ay markii hore ka tageen oo aheyd dekedda magaaladda Berbera.
Warar laga helayo Ganacsatada xoolahan dhoofisay ayaa waxay sheegeen in sababta xoolaha loogu soo celiyey ay ugu weyn tahay iyadoo dowladda Sacuudigu aysan aqoonsaneyn shirkadda ay xoolaha u dhiibteen.
Haseyeeshee, Wasiirka Xanaanada Xoolaha Maamulka Puntland C/llaahi Sheekh Axmed BBC-da wuxuu u sheegay in loo sheegay in xoolahaas laga helay cudurka Rift Valley.
“Markabkan waa la soo celiyay, wuxuuna ku soo wajahan yahay Dekeda Boosaaso, oo maalin dhoweyd uu ka shiraacday, waxaa la soo sheegayaa in laga helay cudur, annaguna waxaa aaminsanahay in aanu jirin warkaas”ayuu yiri wasiir C/laahi.
Dad badan ayaa ayaan darro ku tilmaamay in Wasiirku uu ka hor dhaco ogaashaha runta ah ee xoolaha dib loogu soo celiyey, waxaana hadalkiisa dad badani u arkeen inuu noqon karo caqabad dhibaato u keentay dhoofka xoolaha Soomaalida ee dalka Sacuudiga oo dhowaan la furay.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli wax war ah ka soo saarin xoolaha lagu soo celiyey dekedda magaaladda Boosaaso, iyadoo xiligan ay dowladda Soomaaliya Dowladda Boqortooyada Sacuudiga ku garab istaagtay go’aanka ay xiriirka ugu jartay dalka Kenada.
Yaa amray in lala wareego xarunta Baarlamaanka DFS, ciidamo noocee ah ayaase ilaalin jiray.
Madaxda Maamul Goboleedyada Itoobiya oo ka qayb gelaya shirka maalgashiga Puntland
Shiinaha oo Fatahaadaha Soomaaliya ugu deeqay 1.5 Malyan doolar